State terrorism | OromianEconomist
Fascist Ethiopia’s regime (TPLF)’s another genocide plan (state terrorism). Wal-gahiin Mana-maree nageenya biyyoolessaatiin taa’ame shoroorka’u TPLF mul’isa. November 13, 2017
Tags: Africa, Ethiopia, Genocide Against Oromo People, Human rights violations, Oromia, State terror, State terrorism, The tyranny of TPLF Ethiopia, TPLF/EPRDF Ethiopian Regime is a Contra to a Developmental State
Addis Standard, 12 November 2017
Click here to read related article from OE sources: Ethiopia: Government-Fuelled Conflict & the Need for Unity
Wal-gahiin Mana-maree nageenya biyyoolessaatiin taa’ame shoroorka’u TPLF mul’isa.
Awash Post, Sadaasa, 12, Bara 2017
Manni-Maree nageenyaa biyyoolessaa jeeqamuu, nagaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii irratti marii taasisee jira. Keessattu haala naannoo Oromiyaa keesssa jiru irratti mariin kan xiyyeeffate. Mariin kunis kan gaggeeffame waajjira Minstera Muummee Haayilamaariyaam Dassaalanyitti ture. Walitti qabaan mana mari nageenyaa Muummichi Ministera HD fi Ministerri Ittisaa biyyaa fi hogganaa Mana-maree Nageenyaa obbo Siiraaj Fageessaatin gaggeeffameera. Humnoonni nageenyaa federaalaa fi naannoo, pireezdaantonni naannolee, koomishinaroonni poolisii fi ajajoonni Raayyaa Ittisaa biyyaa marii kana irraa qooda fudhataniiru.
Marii ol’aantummaa isaani kabjsiisuu fi qor-qalbii isaani tasgabbeessu raawwachuu irraa woyyaanonni takkaa duubatti hin jenne. Barbaachisummaan marii kanaas nagaa fi tasgabbiin Oromiyatti qixa barbaadamuun argamuu dhabuu fi karoora nageenyaa kallattii funduraa irratti kaayuudha. Ajandaan dhoksaa marichaas sochii fi gaaffi ummanni Oromoo dhimma abbaa biyyummaa fi dimokraasii irratti kaasaa jiru humnaan danquuf kan kiyyeeffameedha. Qaamolee nageenya federaalaa fi naannoo diriirsuun sagalee ummataa ukkaamsuudha. Qor-qalbii qeerroo fi dhageetti bulchiinsa haaraa OPDO’s cabsuu ni barbaadu.
Haa ta’uu malee ummanni Oromoo sodaa marii nageenyaati miti; labsiin hatattamaa fi ajajni garee komaandi postitiin baati 10f kennamaa ture gaafi fi fedhii ummataa dhaabuu akka hin dandeenye ifa. Hidhaa, tumaa fi dhiigni balbala Oromoo hundatti dhangala’aa ture qabsoo cimse malee tasuma hin gufachiifne. Marii fi konfiransii nageenyaa jechuun qabeenya ummataa fi mootummaa qisaasuu irra gaafi fi yaada ummataa dhaga’uun furmaata waaraa ture. Kana gochuuf woyyaaneen ijaa fi gurra hin arganne. Tuffiin cimaanis keessaa isaaniti belbela. BMNO fi hawaasa bal’aa wajjiin dhimma furmaata ta’uu malu: hidhamaa hiikuu, kan ajjeefamani, qe’ee fi qabeenya irraa buqqa’aniif beenyaa barbaachisu kaffaluu irratti ifaan mari’achuu male. Gochaan hammeenyummaa fi gar-jabeenyaa poolisii federaalaa, Agaazii fi woraanna ittisa biyyaatin ummata Oromoo irratti raawwataa turanif ummataa fi bulchiinsa naannootiin kabaja woyyaaneen barbaaddu mulqamuunis mata dhukkubbi cimaa itti ta’eera.
Qaamolee nageenya naannoo fi federaalaatiin rukutamuu, butamuu fi ajjeefamuun ummata Oromoo haaraa hin turre. Sirna bulchiinsa woyyaanee keessatti Oromoon kanuma keessumeessaa, argaa fi dhaga’aa as gahe. Mariin Manni-maree Nageenyaa biyyaalessaa kaleessa gaggeesse kan calqabaatis miti. Erga labsiin mana marii nageenya biyyoolessa hundeessuu lakk.257/2001 bahee amata 16 ta’eera. Labsichi duras kallattii fi al-kallattiin hojima irra ture. Yeroo rakkoo fi nagaatis dhimmuma itti bahaa turan. Kanaaf maqaa wal-gahii, marii fi konfaransitin shirri qabsoo Oromoo danquuf taasifamu hundi nageenyaa fi tasgabbi biyyaas hin fidu; falmii fi qabsoo ummata Oromootis tasuma gufachiisuu hin danda’u.